Andramena tatsy Singapour : 25 janoary hatramin’ ny 10 mey 2014, iza no nanana ny fahefana? -
AccueilRaharaham-pirenenaAndramena tatsy Singapour : 25 janoary hatramin’ ny 10 mey 2014, iza no nanana ny fahefana?
19/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Namoaka lahatsoraka an-gazety ny MLE omaly izay manendrikendrika an’ i Mbola Rajaonah ho tompon’antoka voalohany tamin’ ny trafika andramena tatsy Singapour. Nefa tamin’ny fotoana nisian’ io raharaha Andramena io, dia mbola mpandraharaha tsotra tsy niditra tamin’ ny resaka politika, na raharaha io olona notononin’ny MLE io. Noho izany, iza àry no manana fahefana tamin’ izany, izay afaka nanamora ny fandehanan’ireo andramena ireo ? Mamy Ravatomanga.
Tahio tokoa izy fa lasa ho Razana, dia ny profesora Zafy Albert izany, izay efa nanana ny porofo rehetra tamin’ ny raharaha andramena nisy teto amin’ny firenena, ary efa nambarany ombieny ombieny izany fahavelony, ka nentiny niaraka aminy any amin’ ny mandrakizay ny porofo rehetra. Ny fivoahan’ ny antontan-taratasy izay nananan’ny profesora tokoa mantsy dia ahafahana namoaka sy nampahafantatra ny vahoaka malagasy hoe iza tokoa ireo izay manao ampihimamba ny haren’ny Malagasy ireo…….saingy inoana marimarina fa any indray andro tsy maintsy hivoaka ny marina. Na izany aza, eo ampiandrasana ny fivoahan’ireo antontan-taratasy ireo, ny tantara politika nisy teto amin’ny firenena dia efa ahafahana mitondra porofo sy manazava ny sain’ny Malagasy hoe, iza marina no tena mpanondra andramena, sy tompon’antoka voalohany amin’izany.
Ny 25 janoary, daty izay nanatanterahan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fianianany tetsy Mahamasina hatramin’ ny 10 mai 2014, dia mbola tsy nahavita nanangana ny governemanta akory ny filoha tamin’izany, ary mbola tsy nahatendry praiminisitra……noho izany ny governemantan’ i Omer Beriziky no mbola niandraikitra ny fampandehanan-draharaha. Nandritra izay fotoana naharitra izay, ilay tsy refesi-mandidy sy mpanefoefo antsoina hoe Mamy Ravatomanga no mpanelanelana teo amin’ny filoha izay vao tonga izany hoe ny filoham-pirenena ankehitriny sy ny filohan’ny Tetezamita mba hamantarana izay hipetraka eo amin’ ny toeran’ ny praiminisitra.
Fa maninona tokoa aza i Mamy Ravatomanga no nanana tombony? Ity mpanefoefo ity izay namana akaiky, sady mpanolotsain’i Andry Rajoelina nandritra ny Tetezamita. Izay hiarahan’ny rehetra mahalala fa tsy misy fanapahan-kevitra raisina izany raha tsy eo i Mamy Ravatomanga. Ohatra amin’ izany , ny tolo-kevitra avy aminy ho an’ ny filohan’ ny Tetezamita amin’ny hametrahana an’ i Hery Rajaonarimampianina ho minisitry ny vola, ary tanteraka izany , satria dia izy no nanolo-kevitra. Akaiky indrindra an-dRajoelina sady eo ihany koa ny fiheverena dRavatomnga fa manana tamberina aminy ny filoha tamin’ny nanendrena azy ho minisitra tamin’ izany fotoana , dia milalao ny asan’ny mpitondra hafatra izy tamin’ izany mankany Iavoloha sy Ambatobe.
Ny 15 febroary 2014, daty voarakitra sy volaza fa niaingan’ny kaontenera tao amin’ny seranan-tsambon’i Tomasina hiazo an’i Chine any Singapour, dia Mamy Ravatomanga hatrany no mbola tompon’ny fahefana manerana ny tanin’i Madagasikara. Satria mbola nanana fijery mahitsy aminy ny filoham-pirenena tamin’ izany……saingy nandritra ny roa volana taorian’ny fahavitan’ ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fianianany , dia mbola ny governemantan’ ny Tetezamita, izay nahitana ny ekipan-dRajoelina no mbola tompon’ny lakile, ary mbola samy natahotra ny baiko avy amin’i Ravatomanga hatrany ny rehetra.
Noho izany tsy mpandraharaha tsotra araka ny anarany, izay no hahavita hamoaka 30 000 bolabola andramena ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Raha ampahatsiahivina ny tantara, dia mampiseho fa ny fanendrena ireo mpanolotsaina miisa valo voalohany dia tsy nahitana mihitsy ny anaran’izany hoe Mbola Rajaonah izany . Ireo mpanolotsaina manokana notendrena ny 5 febroary dia i Henri Rabary-njaka, Rivo Rakotovao, Jaobarison Randrianarivony,Paul Rabary, Rachid Mohamed, Nicole Andrianarison, Herisoa Razafindrakoto ary James Andrinalisoa. Nefa na dia ireo mpanolotsaina manokana izay vao notendrena ny faha-5 ny volana febroary ireo aza, dia tsy hahavita hamoaka paika ahafahana mamoaka bolabolan’ andramena miisa 30 000.
Tsy misy afa-tsy olona manam-pahefana sy matanjaka ara-bola irery, sady atahoran’ ireo minisitra, izay mbola teo amin’ny toerana ihany noho izany no hany tokana afaka manatanteraka sy manome baiko ny hamoahana ireo andramena ireo. Tsiahivina hatrany fa mbola governemantan-dRajoelina anie no nanatanteraka ny fampandehanan-draharaha tamin’ izany e ………tsy misy afa-tsy ingahy matanjaka irery noho izany no afaka namolavola paika ahafahan’ireo andramena ireo mivoaka.
Fandrebirebena saim-bahoaka. Raha toa ka nanatanteraka kaoferansa mahakasika ny « Initiative Emergence Madagascar » (IEM) tany Paris, Frantsa, ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina, ny 29 janoary teo, hita fa fampanantenana poakaty ranofotsiny ihany ...Tohiny